Woza Friday: Liviki Silomculi uObediah Matulana
Lwezi 28, 2014
Umculi uObediah Matulana
Kuliviki kuhlelo Woza Friday intathelizindaba yeStudio Seven uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lomculi uObediah Matulana yena osanda ukukhipha i DVD lakhe lakuqala lomculo elihlanganisela ingoma zakhe ezindala lezintsha.
UObediah Matulana uqale ezomculo ngeminyaka yama 1980s ecula leqembu le Jet Sounds njalo ucindezele ingoma yakhe yakuqala ethiwa Divorce No 1 ngomnyaka ka 1988 okuyingoma eyamukelwa kuhle kakhulu ngabalandeli bomculo.
UMatulana uthi yena wangena kwezomculo efuna ukucindezela ingoma zohlobo lwe Reggae kodwa wasekhuthazwa ukuba ahlabele ingoma zohlobo lwe Tshibilika nguProducer wakhe uBothwell Nyamondera.
Uhlale elalo kodwa uthando lomculo we Reggae njalo nyakenye ngomnyaka ka 2013 ucindezele idlalade lengoma zomculo wamakhosi alethe igama elithiwa 'Testing ground' njalo ingoma elesihloko esinjalo layo ikhona ku DVD.
Nyakenye njalo uMatulana ukhiphe idlalade lakhe elengoma zohlobo lwe Tshibilika elilesihloko esithi 'Isimbazu'.
Ingoma etholakala kulelidlalade ethiwa Asambeni Emakhaya imtholise isicoco emkhosini walonyaka owe Zima.
UMatulana uthembise abalandeli bakhe ukuba uzabaphakulela idlalade elilengoma ezilitshumi umnyaka ungakapheli njalo uthi lelidlalade lizabe lilengoma ezintsha ndawonye lezake zadlubhedu kudala ezigoqela ethi Gawula lethi Val’ umlomo.
Woza Friday: Umculi womdumo weTshibilika uObediah Matulana